Faaqidaadda Toddobaadka, 19 November 2021
Khamiis 19 November 2021
Dhageyso Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka.
Barnaamijkii Faaqidaadda Todobaadka, wuxuu maanta ku saabsanyahay, cadaadiska caalamig ah ee ku aadan dhameystirka doorashada Soomaaliya ee dhowrka jeer dib u dhacday.
Dhageyso Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka
Ku soo dhowaada Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan oo aan ku eegeyno: Doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadkan ka hartay sida guddiga doorashadu ay sheegeen? maxayse yihiin caqabadaha ka hor imaan kara? Seynab Abuukar ayaa ku soo diyaarisay Muqdisho.
Faaqidaadda Toddobaadka: Caqabadaha Doorashooyinka Dadban
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka aqalka hoose ee 1-dii bishan ka bilowday dalka. Doorashada aqalka hoose ayaa bilaabatay iyadoo si weyn loo duray habkii ay u qabsoontay doorashadii xubnaha aqalka sare ee dalka oo heer gabagaba ah mareysa.
Faaqidaadda Toddobaadka: Doorashada Aqalka Hoose ee BFS
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay doorashada xubnaha aqalka hoose ee dhowaan la filayo in ay Soomaaliya ka bilaabato. Doorashada oo dib uga dhacday muddadii loo qorsheeyay ayaa waxa raja laga qabaa in ay si toos ah u bilaabato ka dib markii heshiis ay gaareen....
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay heshiiska ay gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka xilligooda ka dib dhacay ee Somalia, iyada oo bisha October ay ahayd in dhammaan golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynahaba la doorto
Barnaamijka Faaqidaadda: Tarxiilkii Laascaanood
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan go'aankii ay xukuumadda Somaliland magaalada Laascaanood kaga tarxiishay dad ka soo jeeda koonfurta Somalia, waxaa barnaamijka soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya weriyaha VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan khilaafka madaxda sare ee Somalia
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya, wariyaha VOA-da ee Muqdisho, Cabdicaziz Barrow.
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay muranka dhinaca awoodda ah ee u dhexeeya Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo RWe Maxamed Xuseen Rooble
Barnaamijkii Faaqidaadda todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa is-mari waaga siyaasadda ee madaxda sare ee DF Somalia, waxaana Muqdisho noogu soo diyaariyay Wariyaha VOAda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay hab-raaca doorashada Somalia